Semalt विशेषज्ञले Google विश्लेषकमा प्रशासन ट्राफिक कसरी फिल्टर गर्ने भनेर बताउँछन्
यदि तपाईंले गुगल एनालिटिक्स ट्राफिक देख्नु भएको छ र उच्च बम्प फेला पार्नुभएको छ भने, तपाईंको वेबसाइटले नक्कली ट्राफिक प्राप्त गरिरहेको सम्भावनाहरू छन्। यो सबैलाई हुन्छ, र त्यहाँ पीरियडहरू हुन्छन् जब तपाईले नयाँ वेबसाइटहरू सेट अप गर्नुपर्नेछ, भर्खरको डिजाइनहरूमा काम गर्नुपर्नेछ र धेरै समय खर्च गर्नुपर्नेछ जुन तपाईं लेख्नुहुन्छ लेख जाँच्न। यो सबै भ्रमणहरूको रूपमा गणना गर्दछ, तर तपाईं आफ्नो साइटको लागि गलत तथ्या .्कहरूको साथ समाप्त हुनुहुनेछ। एक मात्र विकल्प तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खाताबाट प्रशासक ट्राफिक फिल्टर आउट गर्नु हो।
तपाईं वर्डप्रेस प्लगइनको एक किसिमको साथ त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं यो सामग्री प्रबन्धन प्रणाली प्रयोग गर्नुहुन्न वा प्लगइनहरू मार्फत तपाईंको वेबसाइट अव्यवस्थित गर्न चाहनुहुन्न भने, त्यसपछि तपाईं Semalt को ग्राहक सफलता प्रबन्धक म्याक्स बेलले परिभाषित तलका विधिहरूको साथ अघि बढ्न सक्नुहुन्छ।
१. आईपी ठेगाना निकाल्नुहोस्:
तपाईंले आफ्नो आईपी ठेगाना निकाल्नु पर्छ ताकि यसबाट ट्राफिक तपाईंको गुगल एनालिटिक्स खातामा गणना हुँदैन। यदि तपाईं कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहुन्छ वा अफिसमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईंले अर्को टेक्निक प्रयोग गर्नुपर्नेछ। IP ठेगानाबाट ट्राफिक बहिष्कार गर्न, तपाईंले आफ्नो Google एनालिटिक्स खातामा अनुकूल फिल्टर सिर्जना गर्नुपर्नेछ। तपाईको गुगल एनालिटिक्स अनुप्रयोगलाई निर्देशन गर्नुहोस् जुन विशेष आईपी ठेगाना वा बहु IP ठेगानाहरूबाट आएको हिटहरूलाई ध्यानमा राख्दैन। गुगल एनालिटिक्स खाता खोल्नुहोस् र फिल्टर सेक्सनमा जानुहोस्। नयाँ फिल्टर सिर्जना गर्नुहोस् र फिल्टर नामको बारेमा जानकारी थप्नुहोस्, यसको प्रकार (पूर्वनिर्धारित फिल्टर छनौट गर्नुहोस्), र समावेश बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। २ address.१25.१39..5..53 जस्तो आईपी ठेगाना यस फिल्टरमा थप्न सकिन्छ।
२. कुकी सामग्री द्वारा ट्राफिक बहिष्कार गर्नुहोस्:
तपाईं कूकी सामग्री द्वारा ट्राफिक बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाई एक आईपी ठेगाना वा केही आईपी ठेगानामा फिल्टर लक गर्न सक्नुहुन्न। यसको सट्टामा, तपाइँ अपरेटिंग प्रणाली पुन: स्थापना गर्नुहोस् र कुकिज खाली गर्नुहोस्। यसले कम-गुणवत्ता ट्राफिकलाई फेरि ट्र्याक हुनबाट रोक्छ। अर्को तरिका फाइल सिर्जना गर्नु र ब्राउजरमा कुकी थप्नु हो। यसको लागि तपाईले HTML याट फाइल बनाउनु पर्छ जसलाई फिल्टर ट्राफिक html को नाम दिइएको छ र त्यो फाइलमा एक विशेष सामग्री थप्न नभुल्नुहोस्।
<मेटा HT-Equ = "सामग्री प्रकार" c />
<titles> कूकी सामग्री द्वारा ट्राफिक बाहेक </ शीर्षक>
Google. गुगल विश्लेषकमा फिल्टर थप्नुहोस्:
अब तपाईंसँग ब्राउजरमा कुकिजहरू छन् र फिल्टरहरू सेटअप गर्नुपर्नेछ जुन तपाईंको आफ्नै ल्यापटप वा कम्प्युटरबाट आएको ट्राफिक बहिष्कार गर्न सक्दछ। फेरी, तपाईको गुगल एनालिटिक्स खाताको फिल्टर सेक्सनमा जानुहोस् र कस्टम फिल्टर विकल्पमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ, तपाईंले ट्राफिक बहिष्कार गर्न अपवर्जन विकल्प चयन गर्नुपर्नेछ। अर्को चरण भनेको फिल्टर पैटर्न सेक्सन छनौट गर्नु हो र यस खण्डमा फिल्टर_ट्र्याफी थपिएको हो। फ़िल्टर_ट्र्याफ्टी भनेको तपाईको HTML फाइलको बडि ट्यागमा कस्टम भ्यारीएबलको रूपमा प्रयोग गर्नुभयो। विन्डो बन्द गर्नु अघि सेटिंग्स बचत गर्न नभुल्नुहोस्। तपाईंले यो याद राख्नुपर्दछ कि यस विधिले गुगल एनालिटिक्स खाताबाट डाटा निकाल्नेछ। यदि तपाईं आन्तरिक ट्राफिक विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए तपाईले कुकी पृष्ठ विधि प्रयोग गर्नु पर्छ र फिल्टर लागू गर्नु हुँदैन। तपाईं प्रशासक ट्राफिक फिल्टर गर्न अनुकूलन खण्डहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाइँ फिल्टरहरू सेटअप गर्न सक्नुहुनेछ र आन्तरिक ट्राफिक बहिष्कृत गर्न सक्नुहुनेछ।